Chelsea Oo Go’aan Ka Gaadhay Warqadii Dalabka Bixitaanka Ee Uu Soo Gudbiyay Xidiga Bayern Munich Uwaalatay Ee Callum Hudson-Odoi. - Wargane News
Home Sports Chelsea Oo Go’aan Ka Gaadhay Warqadii Dalabka Bixitaanka Ee Uu Soo Gudbiyay...
Maamulka kooxda Chelsea ayaa go’aan ka gaadhay warqadii dalabka bixitaanka ee uu u soo gudbiyay da’yarka Callum Hudson-Odoi kaas oo dhawaan maamulka kooxdisia Blues u sheegay in uu doonayo sidii uu Stamford Bridge uga bixi lahaa isla markaana uu Bayern Munich ugu biiri lahaa.
Bayern Munich ayaa far dalab oo kala danbeeyay u dirtay Chelsea waxaana la filayay in ay soo gudbiso dalabkii shanaad oo 40 milyan yuro ku qiimaysan laakiin maamulka kooxda Chelsea ayaa go’aan cad ku gaadhay in ayna waxba ka soconayn warqadii dalabka bixitaanka ee uu Callum Hudson-Odoi kooxdiisa u gudbiyay.
Chelsea ayaa meel adag iska taagtay in Callum Hudson-Odoi uu bishan January ka baxo kooxdooda waxayna Bayern Munich ka hor joogsadeen saxixia Hudson Odoi oo balan qaadyo waa wayn ka helay maamulka kooxda Allianz Arena ee Bayern Munich.
Rajadii Bayeren Munich ka qabtay in ay bishan January la wareegto da’yarka aadka loo qiimeeyo ee Callum Hudson-Odoi ayaa hadda burburtay sida uu shaaciyay wargayska Bild ee ka soo baxa dalka Germany kaas oo cadeeyay in maamulka Blues ay diideen warqadii uu Callum Hudson-Odoi uu ku dalbaday in loo ogolaado in uu baxo.
Laakiin wararka ayaa sheegaya in Bayern Munich ay saxiixa xidigan dib u soo cusboonasiin doonto dhamaadka xili ciyaareedkan marka uu furmo suuqa xagaaga iyada oo waliba Callum Hudson-Odoi uu iska diiday in uu heshiis cusub u saxiixo Chelsea.
Liverpool oo hore loola xidhiidhinayay saxiixa Callum Hudson-Odoi ayaan wax dalab rasmi ah ka gudbin balse mar haddii ay maamulka Blues waqti xaadirkan diideen in Hudson-Odai uu Bayern Munich ku biiro waxaa suurtogal ah in Reds ay suuqa xagaaga ku soo biiri karto tartanka saxiixa Callum Hudson-Odoi.
Callum Hudson-Odoi ayaa gool ka dhaliyay kulankii FA Cupka ee ay xalay kooxdiisa Chelsea ugu soo baxday wareega shanaad ee FA Cupka waxaana kadib kulankaas wax laga waydiiyay mustaqbalkiisa iyo xiisaha Bayern Munich laakiin waxa uu iska diiday in uu wax faalo ah ka bixiyo.
War kale oo uu qoray wargayska Guardian ayaa sheegaya in maamulka Chelsea ayna wali ka jawaabin warqadii dalabka bixitaanka ee Hudson-Odoi inkasta oo wargayska Bild ee Germany oo wararkan si dhaw u soo gudbinayay uu hadda shaaciyay in maamulka Blues ay diideen bixitaanka Hudson-odoi.
Si kastaba ha ahaatee, maamulka Chelsea ayaan doonayn in xidiga hibada fiican leh ee Callum Hudson-Odoi uu kooxdooda ka baxo inkasta oo ay ilaa hadda ku dhibtoonayaan sidii ay ugu qancin lahaayeen in uu qandaraas cusub saxiixo taas oo Bayern Munich iyo kooxaha kale ka caawin karta in ay suuqa xagaaga heli karaan.